Banijya News | » पक्राउ पर्ने भएपछि चिनी उद्योगी धमाधम संम्पर्कमा, को को छन् त सम्पर्कमा ? पक्राउ पर्ने भएपछि चिनी उद्योगी धमाधम संम्पर्कमा, को को छन् त सम्पर्कमा ? – Banijya News
पक्राउ पर्ने भएपछि चिनी उद्योगी धमाधम संम्पर्कमा, को को छन् त सम्पर्कमा ?
गृह मन्त्रालयले उखु किसानको बक्यौता नतिर्ने व्यापारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएसँगै चिनी उद्योगी सम्पर्कमा आउन थालेका छन् ।
उखु किसानहरुले सहमतिअनुसारको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै चिनी उद्योगमा तालाबन्दी गरी धर्ना उद्योग क्षेत्र र काठमाडौमा समेत धर्ना दिदै चरणबद्ध आन्दोलन गरेपछि सरकारले उद्योगीलाई पक्राउ गरेर भएपनि कृषानको रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको भोलिपल्ट घमाघम उद्योगी सम्पर्कमा आएका हुन् । अर्बों रकम नतिरी अटेर गरेर बसेका उद्योगीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयले बक्यौता नतिर्ने व्यापारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उनीहरुलाई पक्राउ गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाउन गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भनेको हो । उद्योग र कृषि मन्त्रालयले उखु किसानको पैसा नदिने व्यापारीमाथि कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई हिजो पत्र पठाएको थियो ।
श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा, लुम्बिनी, महालक्ष्मी र बागमती सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । ती उद्योगबाट किसानले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ ।
ती उद्योगले दुईदेखि पाँच वर्षसम्मको भुक्तानी नदिएको उखु उत्पादक महासंघ र चिनी उद्योग संघले बताएका छन् । सबैभन्दा बढी रौतहटस्थित श्रीराम सुगर मिलले ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । श्रीरामका सञ्चालक हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल हुन् । उनीहरु समेत उद्योग मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएर पैसा तिर्ने भाखा मागेका हुन् । त्यस्तै अन्नपूर्णका सञ्चालक भने राकेश अग्रवाल समेत सम्पर्कमा आएका छन् । अन्नपूर्णले भुक्तानी नदिएपछि सर्लाही र रौतहटका करीब डेढ सय किसान यतिबेला काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले संघर्ष समिति गठन गरेर विभिन्न चरणका आन्दोलन गरिरहेका छन् । अग्रबाललो पनि पैसा तिर्ने भाखा राख्दै उद्योग मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका हुन् ।